Listings in အုတ်၊ ထုံး၊ သဲနှင့် ကျောက်အမျိုးမျိုး ရောင်းဝယ်ရေး and ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in အုတ်၊ ထုံး၊ သဲနှင့် ကျောက်အမျိုးမျိုး ရောင်းဝယ်ရေး and ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ
အမှတ် ၂၇၅၊ ၈၁လမ်း၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊, ,
02-4032990 , 02-4021977
in ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများ, ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ, စက္ကူအမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေး
အမှတ် ၁၉၊၂၀၊ (၃၈)လမ်း၊ (၇၈)လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊, ,
02-4060422 , 09-2015549
in လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ, ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ, အမွှေးတိုင်၊ အမွှေးတုံး, တစ်ရှူးစက္ကူအမျိုးမျိုး
Sweety Trading Co., Ltd.
အမှတ် ၆၃၃၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ (၂၂)လမ်း နှင့် ဗိုလ်ရွဲလမ်း ကြား၊,
01-246101 , 01-381503
in အင်ဂျင်ဝိုင်နှင့်အခြားစက်ဆီ, ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ
A.One.Top & Star Light Co.,Ltd
၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-775387544 , 09-775387545
in ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ
AK Mandalay Co.,Ltd.
အမှတ် ၁-မ/၂၄၊ ၆၈လမ်း၊ ငုဝါလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
02-2848760 , 09-444024549
02-2848760, 09-444024549, 09-402669979
SEIN WUT HMON CO., LTD.
၃၅လမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊, ,
02-4034767 , 02-4034861
AMT Group Co.,Ltd.
(၂၇)လမ်း၊ ရရလမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ ဟေမာဇလ၊, ,
02-4068958 , 02-4065870
02-4068958, 02-4065870, 02-4068940
in အရက် နှင့်ဘီယာ (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ), ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ
APB Alliance Brewery Co.,Ltd. [Heineken]
အမှတ် တ/၇၊ ၆၈လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် မိုးသောက်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
02-2847402 , 02-2848439
in ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ, ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ, ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ, နိုင်ငံခြားဆေးမျိုးစုံဆိုင် (လက္ကား)
Advanced-Medical & Diagnostics Trading Ltd.
အမှတ် မ/၂၈၊ ၅၉လမ်း၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-444478830 , 09-401222537
Agricultural & Industrial Development Co.,Ltd.
အမှတ် အယ်(လ်)-၁/၅၊ ပထမထပ်၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
02-2832643 , 09-896501605